वातावरण व्यवस्थापनका फाइदा - Karobar National Economic Daily
वातावरण व्यवस्थापनका फाइदा
query_builderApril 18, 2017 10:46 AM supervisor_accountरमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ visibility417
वातावरण प्रदूषण मानवनिर्मित समस्या हो । वायु, भूमि, ध्वनि र जलप्रदूषणको मुस्लोले राजधानीका लाखौँ मानव शरीरका अङ्गप्रत्यङ्ग मक्काउँदै छ । बढ्दो असचेत तथा अव्यवस्थित सहरीकरण र औद्योगीकरण, परम्परागत इँटाभट्टा तथा कोइला प्रयोगलगायत धूवाँप्रदायक कारखानाहरू, पुराना सवारी साधनबाट निर्लज्ज फ्याँकिएका प्रदूषणका डङ्गुरले प्रकृति धमिलिँदो छ ।
वातावरणीय संरक्षणको गम्भीर पक्षसँग पर्यटकीय गन्तव्यले नातो गाँसेको राजधानीको शोभा र सौन्दर्यमा दुर्गन्धित सहरको उपनाम गाँसिने भय छ । जलवायु परिवर्तनको असरमा विश्वको चौथो सङ्कटापन्न मुलुक बन्दै गर्दा हाम्रो मस्तिष्कमा नरकतुल्य जीवनशैलीको लिसो टाँसिएको छ ।
आरोग्य र स्वास्थ्यको चिप्लो भाषण छाँट्ने तर हरिया पहाडलाई सुकेनास लगाएर वन्यजन्तुलाई सुकुम्बासी बनाउँदै पक्षीलाई शरणार्थी बनाउने मानिसको दुष्चरित्रमा सुधारको शङ्ख ध्वनि बजेमा मात्र प्राणी अस्तित्वरक्षाको बाटो सोझिने आशा बढ्छ ।
स्वच्छ प्रकृतिको सिरानीमा सुन्दर स्वस्थ जीवनरथ हाँक्न चाहने मानिसले रोगको कारण आपैmँ जन्माउँछ, प्राणी अस्तित्व सङ्कटको चक्रव्यूह आपैmँले रच्छ । मन्दिरमा स्वच्छ भई पूजाअर्चना गर्ने तर प्रसादका टपरी, फलोपूmलो या प्लास्टिकजन्य फोहोर छेउमा मिल्काउने संस्कारबाट हामी कहाँ उम्केका छौँ र !
गाउँका स्वच्छ पाखापखेरीमा थोत्रा, पुराना जुत्ताचप्पल, प्लास्टिकले अलिअलि विस्तारवादी नीति लिएर दौडिँदै गर्दा पाटी, वनभोज या शुभ–अशुभ कार्यहरूमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिसले प्रकृतिका गर्भमा फोहोर पदार्थ फाल्न मन सानो पार्दैन ।
सिसा, टिनजन्य अपाच्य पदार्थलाई बिनाहिचकिचाहट मिल्काउने आधुनिक आडम्बरमा गमक्क पर्ने मानिसले आपूmलाई प्रकृति विध्वंसक हुँ भन्न त कहाँ रुचाउँछ र ! निर्माणाधीन र भत्केको सडकमा सवारी चापले तुवाँलोभैmँ ढाकिदिएको धुलाम्मे परिवेश, प्रतिस्पर्धामा लापरवाही तरिकाले बजाइने हरनका कारण राजधानीवासीको स्वस्थ्यमा सङ्कट देखा परेको छ ।
वायु प्रदूषणकै कारण मुलुकका ९० प्रतिशत मानिसले यमढोका ढकढक्याउनुपरेको अनि काठमाडौँमा मापदण्डभन्दा पाँचौँ गुणा बढी प्रदूषणले घेरिसकेको प्रतिवेदनलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दर्साइदिन्छ । काठमाडौँको रत्नपार्कको प्रदूषण मापन यन्त्रद्वारा १ सय ६ घनमिटर वायुप्रदूषणको मात्रा देखाएको छ ।
लगभग २ सय दिनभन्दा बढी मापदण्डविपरीत वायुले राजधानीमा डेरा जमाएका त्रासद प्रमाण फेला परेका छन्— कारण, राजधानी उपत्यकालाई छाडेर हावाले बाहिरिने बाटै भेट्दैन, विज्ञको मत छ । मेडिकल जर्नल द लासेन्टद्वारा जारी प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष १० लाखभन्दा बढी मानिसले वायुप्रदूषणकै कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको तथ्य पस्केको छ ।
१४ प्रतिशत क्यान्सर रोगीले मृत्युकै बाटो रोज्नुपरेको अनि फोक्सोजन्य रोग, टाउको दुख्ने, खोकीजन्य अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रोगले सताउने, खाना रुचि नहुने, बान्ता हुने, वाकवाकी लाग्नेजस्ता सरुवा तथा नसर्ने रोगका असर देखिएका र भोग्दै गरिएका तथ्यहरूलाई सञ्चार माध्यमद्वारा सचेतनाका लागि पस्किएकै छन् ।
कतिपय अपरिचित रोगसँगै नाक, कान, घाँटी, मुटु, नसा, फोक्सोजस्ता अति संवेदनशील अङ्गमा प्रदूषणको प्रत्यक्ष प्रहार हुने चिकित्सकहरूको मत पाइन्छ । विषादीले सजिसजाउ वासी तरकारीका साथमा दूषित पानीको थप परिकारको फलस्वरूप अस्पतालको लेखा शाखामा मोटो रकमको कारोबार बढिरहन्छ ।
शरीरमा अत्तर छर्केर मुखमा माक्स लगाउने सभ्यता बनाएका हामीले रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बुद्धिमानी हो भन्ने कुरा बिर्सेका छौं । म एक्लोले गरेर के बिग्रन्छ भन्ने निर्घिणी सोचकै कारण दुर्गन्धले स्थान पाएको हो ।
सन्तुलित वातावरणको सुरक्षा, संरक्षण तथा संवद्र्धनको संवेदनशील कित्तामा राजनीतिक गोलचक्करका धब्बा नभई सजीव प्राणीको अस्तित्व रक्षाका विषय गाँसिन्छन् । अतः प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने तर प्लास्टिक उद्योगको विकल्पसँग सरलीकरण हुन नसकेका दृष्टान्तसँग हाम्रा प्रयत्न फितला साबित बनेका छन् ।
बाग्मती, विष्णुमतीलगायत सडक सरसफाइको एकता कार्यक्रमका सराहनीय सुकार्यमा केही जुटेका छन् । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासँग एकताको नातो गाँसेर पर्यावरणीय स्वच्छताको महायज्ञमा सचेत नागरिक होमिएका पनि छन् ।
थोत्रा सवारी साधनलाई बिदाइ गरेर यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका योजनाले राहत दिन्छ । दीर्घकालीन वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापनको नीतिले जिउन पाओस्, अब । कुहिने र नकुहिने फोहोरबाट रुपैयाँ फल्दै गर्दा किसानले प्राङ्गारिक मललाई कोठेबारीमा घोप्ट्याओस् ।
कोही बिजुली उत्पादनमा जुटून्, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन प्रदूषण नियन्त्रण र रोजगारको दुवै हातमा लड्डु फलोस्, हाम्रो चाहना छ । पुनःप्रयोग गर्न सकिने, प्रशोधन गर्न सकिने तथा नवीकरणद्वारा प्रयोगमा ल्याउन सकिने सामग्रीको सूची तयार पारेर प्रदूषण व्यवस्थापनका साथमा आयआर्जन र रोजगारीको दोहोरो फाइदाका सम्भावनाहरू तड्पिरहेका छन् ।
निसङ्कोच गाडीभित्रबाट फोहोर फ्याँक्नेले कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने अनि गाडीहरूमा फोहोरका टोकरीले स्थान पाउने नियम अब कागजमा अड्कनु हुन्न । राजधानीमा कमसेकम सडकका छेउमा हरियाली वृक्षरेखाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । विश्वमा तीव्र गतिमा विस्तारित औद्योगिक तथा कृषिजन्य विकासले वायुमण्डलीय नियमलाई खलबल्याउँदै छ ।
विषादीको प्रयोग, अम्लीयकरण, वनविनाश, मरुभूमिकरणजस्ता कारणले जैविक विविधतामा ह्रास आई पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रहार हुन्छ । विश्वव्यापी ऊष्णता बढेको छ, वायुमण्डलीय ओजोन तहको नाश भइरहेको छ ।
सूर्यको विकिरण सोभैm पृथ्वीमा आइपुग्न थालेको छ । फलतः मानिसलगायत जीवित प्राणीको अस्तित्व नै गुम्ने खतरा बन्ने वैज्ञानिक रहस्यले मनमा पहिरो जान्छ । आज यो विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न राष्ट्रका सरकारहरू, भूगर्भशास्त्री, वातावरण संरक्षणविद्, अनुसन्धाता, चिकित्सक तथा वैज्ञानिकहरू चिन्तित छन् । यसर्थ प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्या केवल एउटा सहर, देशको पेवा नभएर तमाम पृथ्वीवासी सजीव प्राणीको अस्तित्व रक्षाका लागि हो ।
मानवीय क्रियाकलापकै कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा आवश्यकताभन्दा बढी जम्मा हुन थालेको वैज्ञानिक तथ्य छ । स्थानीय स्तरदेखि सिङ्गो मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लागि यो विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा योजनाहरू जति बन्छन्, त्यति कार्यान्वयन पक्षमा वर्कत चाहिने रहेछ । भूकम्प, सुनामी, बाढीपहिरो, ज्वालामुखी आदिका कारण हुने प्रदूषणबाट सचेतता र सावधानी अपनाएर मानिसले बाँच्न र बचाउन सक्छ, तर रोक्न सक्दैन ।
कलकारखाना, उद्योग, आणविक भट्टी, इन्धन, जनसङ्ख्या वृद्धि, द्वन्द्व, युद्ध, सवारी साधनको विकासले निम्त्याएको विनाशको वैज्ञानिक रहस्यतिर नियाल्दा मानिसले अक्सिजनको सिलिन्डरलाई घाँटीमा झुन्ड्याउने दिनमा प्रवेश नगर्ला भन्न पनि सकिन्न । वातावरणसँग सम्बन्धित दिवस, गोष्ठी, सेमिनार हुँदै नीति तथा ऐन–कानुनले हुर्कन पाउनुपर्छ । ।
वृत्तचित्र, सचेतना अभियान, पर्चा पोस्टर वितरण, विद्यार्थी वर्गमा अतिरिक्त तथा शैक्षिक विषयक कार्यक्रम सबै पक्षसँग वातावरणीय स्वच्छताको नातो गाँसिन्छ । समस्या समाधानका लागि उब्जिन्छन् तथापि सिद्धान्तभन्दा व्यावहारिक कार्यान्वयन सबल बन्नैपर्छ ।
हाम्रो सनातन संस्कारले सिकाएको वृक्षारोपण, प्रकृति संरक्षण तथा प्रकृति पूजादेखि आजभोलि पढाइने विषयमा राखिएका विषयलाई पनि व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ । पृथ्वी सबैको साझा घर हो ।
वातावरण कुनै एक पुस्ताले उपभोग गरेर तिरस्कार गर्ने क्षणिक उपभोग्य वस्तु होइन; न त यसको रक्षामा एउटा व्यक्ति, एउटा संस्था वा एउटा राज्यको मात्र दायित्व जोडिन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन समस्यालाई ध्यानमा राखेर बस्ती व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल तयार पारेर करेसाबारीमा प्रयोग गरिनुपर्छ । फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने विषयमा गाँसिएको रोजगार तथा प्रदूषण सुव्यवस्थापनको दोहोरो फाइदासँग वैज्ञानिक र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
नकुहिने तर पुनःप्रयोग गर्न सकिने, प्रशोधन गर्न सकिने तथा नवीकरणद्वारा प्रयोगमा ल्याउन सकिने सामग्रीको सूची तयार पारेर प्रदूषण व्यवस्थापनका साथमा आय आर्जन र रोजगारको दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ । अतः सम्पूर्ण प्राणीको अस्तित्व बचाउका लागि प्राकृतिक संरक्षण, सन्तुलन, संवद्र्धन तथा विकास रक्षाको खाँचो छ ।
वातावरण प्रदूषण प्रकृति वातावरणीय संरक्षण